​पटका कारखानामा भएको आगलागीमा ३० जनाको मृत्यु
जकार्ता । इन्डोनेसियाको एक पटका कारखानामा बिहीबार आगलागी हुँदा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४६ कामदार घाइते भएकाछन् ।
शहरको सुरक्षा अधिकारी सादुनीका अनुसार घाइते सवैजनालाई विभिन्न तीन अस्पतालमा राखिएको छ । मृतकमध्ये प्रायः उत्पादन कक्षमा काम गर्ने मजदूर रहेका छन् । उक्त....
एक वर्षअघि निधन भएका राजा भूमीबोलको अन्त्येष्टि गरिँदै
काठमाडौं । आज भन्दा करिब एक वर्षअघि निधन भएका थाइल्याण्डका राजा भूमीबोल अदुल्यादेजको विशेष सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ ।
अदुल्यादेजको अन्त्येष्टिका लागि थाइल्याण्मा आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । अन्त्येष्टि समारोहमा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक सहभागी हुने बताइएको छ । अन्त्येष्टि....
​मलेसियामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । मलेसियाको पेनाङमा बिदेशी कामदार बोकेका दुईवटा बस आपसमा जुध्दा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ३३ जना कामदार घाइते भएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार आज बिहानै साढे पाँच बजेतिर सोनी कम्पनीको कारखानामा कार्यरत नेपाली र इण्डोनेसियन कामदार बोकेका बस जुधेको....
​आज जापानमा संसदीय निर्वाचन हुँदै
टोकियो । जापानमा आज संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । एक महिनाअघि संसद् विघटन गर्दै त्यहाँका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मतदानका लागि आजको मिति तोकेका थिए ।
उत्तर कोरियाले लगातार गरिरहेको परमाणु परीक्षणले जापानमा देखिएको चुनौतीलाई जोड्दै आबेले चुनाव घोषणा गरेको जनाइएको छ । संसदको अवधि एक....
​भारतमा ट्रक दुर्घटना हुँदा दसको मृत्यु, १२ घाइते
नयाँदिल्ली । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा शनिबार एउटा ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । सोही दुर्घटनामा अन्य १२ जना समेत घाइते भएका छन् ।
महाराष्ट्रको राजधानी सहर मुम्बई देखि तीन सय ६५ किलोमिटर टाढा साङली जिल्लाको तासागौन नजिकै दुर्घटना भएको प्रहरीले....
​चीनमा संस्कृत शिक्षा ! शिक्षक नेपाली
काठमाडौ । नेपालमा कम्युनिष्ट छवि बोकेर सुरु भएको माओवादी जनयुद्धताका संस्कृत भाषा र शिक्षाको विरोध गरिएको थियो । स्कुलमा पढाइने संस्कृतका पुस्तकहरु च्यातिन्थ्यो । धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिष्ट विचारधारा पछ्याएको माओवादीले धर्मप्रतिको कटिबद्धताकै विरोध गथ्र्यो ।
तर कम्युनिष्ट आन्दोलन अनि शासनका कारण विश्व शक्तिका....
​अफगानिस्तानमा आक्रमणः ६० जनाको मृत्यु
काबुल । अफगानिस्तानका दुईवटा मस्जिदमा गराइएका आक्रमणमा परी ६० जनाको मृत्यु भएको छ ।
राजधानी काबुलमा रहेको शिया मुसलमानको मस्जिदमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली तथा विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा करिब ३९ जनाको मृत्यु भएको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार मृत्यु हुनेमासबै मस्जिदमा आएका भक्तजन रहेका....
मिसेलसँग बिहे गर्नुअघि अर्कै युवतीसँग प्रेममा थिए बाराक ओबामा, प्रेम पत्र सार्वजनिक
काठमाडौ । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपती बाराक ओबामाकी अहिलेकी श्रीमती मिसेल ओबामा हुन् । उनीसँग बाराकको सम्बन्ध सुमधुर छ ।
तर मिसेलसँगको सम्बन्धमा जोडिनुअघि ओबामाको प्रेम अरु कसैसँग थियो । इमोरी विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेका बाराक ओबामाका प्रेमपत्र अनुसार उनी अलेक्जान्ड्रा म्याकनियर नामकी युवतीसँगको प्रेममा थिए....
नागरिकता त्यागेर धेरैजसो कोरियन कुन देशमा बस्न चाहन्छन् ?
सोल । नेपालीहरु रोजगारीको लागि कोरिया जान्छन् । तर कोरियनहरु भने आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अर्कै देशको वासिन्दा बन्न लालायित देखिएका छन् ।
आफ्नो देशको आइडी लिने भन्दा नागरिकता त्यागेर अन्य मुलुकको नागरिकता लिने कोरियनको संख्या बढ्दो रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । बिगत....
​चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदै
बेइजिङ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन (काँग्रेस) बुधबार बिहान सुरुहुने भएको छ । उक्त सम्मेलन बुधबार बिहान ९ बजे बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा सुरु हुने भएको बेइजिङबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सो सम्मेलनको सबै तयारीहरु पूरा भएको चिनियाँ....